Axmed Muumin Seed Vs Cabdirashiid Xassan Mataan | Cadceed newssite
Axmed Muumin Seed Vs Cabdirashiid Xassan Mataan
Marka hore caalamka iyo aduunkan aynu joogno waxa jira dad siyaasiyiina kuwaasoo siyaasada nuucyo iyo sobobo kala duwan u gala. Tusaale ahaan dadka qaar ayaa siyaasada u gala hunguri iyo shaqa doon halka kuwa kalana siyaasada ugalaan mabaadii iyo aaminsanaan wax ay aaminsanyihiin oo ay rabaan inay ka midha dhaliyaan.
Waxa kaloo iyaguna jira dad aan siyaasiyiin ahayn balse jecel inay siyaasada ka faalloodaan aadna u xiiseeya. Haddaba aniga oo ah dadka siyaasada Somaliland aad uxiiseeya mararka qaarkoodna jecel inaan ka faalloodo waxyaalaha aan la yaabo ama indhahayga soo jiita ayaan waxan maanta jecleystay inaan bal isyara dul taago amma aan is barbardhigo labo siyaasi oo dhinaca Awdal siyaasada kasoo galay isla markaana xisbiga Waddani oo aan taageero badan u hayo ninba mar ka baxay.
Labadan nin oo aan maanta qalinka u qaatay oo kala ah sida ciwaanka ku qoran Cabdirashiid Xassan Mataan iyo Axmed Muumin Seed waa siyaasiyiin usoo ban baxay inay siyaasada Qassaaro iyo faa’iido, Cay iyo Amaan, Jab iyo farxad, Guul iyo Guuldaro intaba inay kala kulmaan balse anoon cay iyo ceeb midkoodna u quudhayn haddana ragu goldaloolooyin iyo guulaba way udhashaan waxanan jecelahay bal inaan udhaadhoco ujeedada aan labadan nin maanta siyaasadooda inaan ka faalloodo uxiiseeyay.
Waa marka hore anoo faallada kusoo koobaya burburkii Udub iyo intii ay jireen xisbiyada Kulimiye Waddani Iyo Ucid iyo kaalmihii ay labadan nin kaga kala jireen siyaasada wakhtigaa bal aan ku horeeyo Axmed Muumin Seed.
Axmed Muumin Seed waxa uu ahaa siyaasi Waddani ka tirsan, isaga oo muddo badana siyaasada Somaliland kusoo jiray waxa kaloo uu ahaa nin bartay godadka iyo khaanada guusha siyaasada Somaliland lagu qariyo.
Mudadii uu ka midka ahaa waddani waxa uu ahaa Mr. Seed shaqsi marka uu dhaliisha xukumada usoo fadhiisto dadku dhagaha uraaricin jireen. Waxana uu ahaa nin hadaad taageere utahay iyo hadii kalaba ay mixnada siyaasada iyo xan xantadeedu kugu qasbaysay bal inaad dhegaysato.
Hadal cad ujeedo cad iyo hiigsi siyaasadeed ayaa gundhig u ahaa Axmed Muumin Seed habdhaqankiisa siyaasadeed waana nin lagu tilmaami karo shaqsi la isku halayn karo halgan siyaasadeedna lala gali karo is hor wadna ku wanaagsan hadaladiisuna aanay isdhaaf lahayn mawqafkiisuna cadyahay waligiina intii uu kujiray aanay si badheedha iskaga hor iman madaxda iyo xubnaha xisbigii uu ka tirsanaa ee Waddani.
Iyada oo ay sidaa tagay ayaa hadana ugu dambayntii Axmed waxa soo food saartay guuldaro siyaasadeed oo ah tii uu kaga baxay xisbiga Waddani oo aan anigu aaminsanahay inuu ku degdegay, waayo waxa hubaala hadii uu kusii jirilahaa kana dhex halgami lahaa xisbiga waddani in xulufadii soo weerartay oo ahayd mid iska Marya Alloola in uu mustaqbalka kaga guulaysan lahaa talada xisbiga balse waxa uu Axmed doorkaa noqday Maroodi shiniyi ku ururtay dabadeedna iska dhacay.
Waxana Axmed haatan ka mid yahay xisbigii uu macaaridka kulul ku ahaanjiray ee Waddani.
Cabdirashiid markii uu siyaasada Somaliland soo caga dhigtay waxa uu kusoo dul degay xisbigii Udub mudo yar ka bacdina xisbigaasi waxa uu ku burburay moran dhexmaray xulufadii Cabdirashiid oo ahayd mid xisbigaa ku cusbayd iyo ubucdii xisbiga UDUB.
Kadib Cabdirashiid Xassan Mataan iyo shirkadiisii siyaasadu waxay u wareegeen dhinacaa iyo xisbiga Ucid.
Cabdirashiid mudo badan ayuu xisbigaa kamid ahaa laakiin waxa muuqatay mudooyinkii u horeeyayba in kooxdii Cabdirashiid iyo kooxihii Faysal ay isku noqdeen waayeel cay badan iyo caruur caasiya.
Tusaale ahaan waxan xasuustaa moran dhex maray Cali Guray iyo Cabdirashii oo labaduba kamid ahaa saraakiishii xisbiga ee garabkii Jamaal hogaaminayay kuwaas oo ay ahayd in ay kubada dhinac uwada lagaan balse mararka qaar goolal dhexdooda ah iska dhalinayay.
Leeleelan badan oo siyaasadeed oo uu kala kulmay xisbigii ucid kadib Cabdirashiid Xassan Mataan waxa uu si kadisa iska casilay xisbigii Ucid, wakhtigaa oo uu saaxiibkii Jamaal Cali Xuseen ku canaantay Cabdirashiid inaanu la tashan isla markaana uu cidlo iyo warrankii Faysal kaligii kaga cararay.
Muddo yar kabacdi Cabdirashiid waxa uu galay xisbiga Waddani oo uu ugu tagay Axmed Muumin Seed waxanay halkaa ku kulmeen murashaxa madaxweyne ku xigeenka xisbiga ee haatan Maxamed Cali.
Cabdirashiid waxa lagu xantaa inuu Maxamed Cali oo ahaa ninkii ay Seed isku hayeen jagada murashaxa madaxweyne ku xigeenka uu garab siiyay isla markaana uu ka hawlgalay inqilaabkii seed.
Hayaankii Axmed Muumin Seed kadib waxa mudadiiba soo baxday in Cabdirashiid iyo Maxamed Cali siyaasada ku kala caajiseen isla markaana aanay isla haysan, dardartii iyo horumarintii xisbiga ee gobolada galbeedkuna fara dhexdooda kasiibatay.
Xaajo waxay socotaba waxa maanta la soo gaadhay in Cabdirashiid xisbigii sadexaad ka hayaamo lamana oga meesha uu bustaha dhiganayo. Balse tuhuno hore iyo xamxam jirta ayaa sheegaysa inuu godkii Axmed galay ee Kulmiye kadaba galayo.
Jawaabtu waxay utaalaa Cabdirashiid Xasan Mataan oo kaliya